Indlu yomthi wamaqunube - I-Airbnb
Indlu yomthi wamaqunube
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMirella
Zicwilise kumdibaniso we-rustic kunye ne-vintage ambiance yeli khaya lihlaziywe ngokupheleleyo. Le ndlu ine, phakathi kwezinto ezibonisa uphawu, ikhitshi elakhelwe ngaphakathi elivula egadini elineefestile ezimbini ezinkulu, ezixhotyiswe ngebarbecue kunye netafile yokutyela ngaphandle, igumbi lokuhlala elinomabonakude kunye neSky TV, iindawo zokulala ezimbini, ehleli kwigumbi kunye yangasese enkulu. Indlu inikwe ifanitshala yexesha kunye neekeramikhi zeSeminara eziqhelekileyo.
Le ndlu yaqala kwiminyaka yoo-1900 kwaye ngenxa yeempawu zayo zesakhiwo, kunye neendonga zamatye ezingqingqwa kakhulu, ipholile kakhulu ehlotyeni kwaye ishushu ebusika. Nangona ukwindawo ezolileyo, eneendawo eziluhlaza ngasemva kwendlu, yimizuzu nje embalwa ukusuka kwindlela yokuhlangana yemoto, imizuzu emi-5 ukusuka elwandle, kunye nemizuzu engama-30 ukusuka kwindawo yabakhenkethi yeentaba eGambarie d'Aspromonte, iikhilomitha ezisi-8 ukusuka esixekweni. embindini Reggio eCalabria.. Apha ungandwendwela imyuziyam yezakudala yaseReggio Calabria, kunye neRiace Bronzes yayo edumileyo, iVia Marina ebalaseleyo ngombono weStrait kunye neMount Etna. Kulula ukufikelela eScilla, nelali yayo yokuloba, iChianalea, okanye kwanedolophu esentabeni apho unokuhamba khona.
Le ndawo izolile, intsha kwaye iyaphumla, ijikelezwe ziigadi zesitrasi, kodwa kufutshane nomnyango wendlela. Ukuhamba imizuzu embalwa yiParco della Mondiality, apho abantwana banokudlala khona kwaye abantu abadala baphumle kwaye bahambe.
Umbuki zindwendwe ngu- Mirella
Ndiyakonwabela ukunxibelelana neendwendwe kwaye ndibanike ulwazi nge-imeyile okanye ngokubhaliweyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Reggio Calabria